Ukuhlola Ubuholi nge-Telecommuting | Martech Zone
NgoLwesine, Juni 26, 2008 Lwesine, Disemba 15, 2016 Douglas Karr
Namuhla kusihlwa ngihlangane noPat Coyle nabanye Ama-Smoosiers ePat's Open House ekomkhulu elincane lase-Indiana.
Ingxoxo eyodwa enkulu ebenginayo bekunguLalita Amos, Umqeqeshi Wobuholi kanye nochwepheshe Wezabasebenzi, I-Purdue Alumni, kanye noProfessor ohlanganyele e- NYU. Ngibe nenjabulo yokwabelana ngesiteji noLalita lapho ngikhuluma ne IABC ngokusetshenziswa kwamaNethiwekhi Omphakathi ngaphakathi kwezinkampani.
ULalita uqaphele ukuthi ubuchwepheshe empeleni buphoqa abaphathi ukuthi babe ngabaholi abangcono. Okunye okwenziwa yi-telecommuting ukuthi abaphathi abakwazi ukwenza izinto ezincane, bahlulele umuntu ngokubukeka kwabo noma balalele inhlebo yehhovisi ukudala umbono ongamanga. I-Telecommuting idinga abaphathi ukuthi baxhumane kahle, baphathe amashejuli ngendlela efanele, bathembe abasebenzi babo, babeke futhi bagcine izinhlelo nezinhloso zokusebenza ezisebenza kahle, kanye nokukala ukusebenza kwabasebenzi babo okwangempela ukusebenza!
Akukho okungabeka umholi obuthakathaka emaphethelweni kunokusebenzisa uhlelo oluqinile lokuxhumana ngocingo! Yize kuletha inqwaba yezinye izinselelo, umholi omkhulu angashayela ukukhiqiza okuhle ngohlelo olufana nalolu, ngenkathi enza ngcono ukwaneliseka kwabasebenzi nokugcinwa. Vele, ngentengo yegesi eyeqile ku- $ 4 / gal, kukhona nesikhuthazo semali.
Tags: Lalita AmosUbuholingocingowfhukusebenza ekhaya
UJun 27, 2008 ngo-7: 47 AM
Kusabonakala kukhona ukungabaza ukuthi izinkampani zisebenzise i-telecommunting yize sekufakazelwe ukuthi zilungele imvelo, abasebenzi bezempilo yengqondo, kungasaphathwa amahora nokulawula umsebenzi ukuthi abuyise impilo yakhe. Mhlawumbe kudingeka kube nokuqeqeshwa okwengeziwe kwabaholi nabaphathi ukuthi bangabaphatha kanjani abasebenzi babo bezokuxhumana ngocingo.
UJun 27, 2008 ngo-8: 55 AM
Angivumelanga ngaphezulu! Ngikhulumile noLalita ngale ndaba kanye nokuthi kungaba 'mhlophe kakhulu' ukubeka umbhalo onolwazi ngezinzuzo zokuxhumana ngocingo kanye nezinqubomgomo ezithile zesampula, imininingwane yezomthetho, njll.
UJun 27, 2008 ngo-9: 45 AM
Angiqiniseki ngalokhu. Emsebenzini wami wokugcina, ngangisehhovisi futhi umphathi wami wayeshayela ucingo. Kwakukubi. Wayenombono wokuthi kwenzakalani nokuthi ngenzani enganginembile. Ngicabanga ukuthi wayezama ukuqondisisa kude, futhi kwangishayela amantongomane. Lapho kufika ezingeni lokuthi ngichitha isikhathi esiningi ngizama ukufakazela ukuthi ngenza umsebenzi wami kunokuthi ngisebenze empeleni, ngayeka.
UJun 27, 2008 ngo-10: 24 AM
Akukho ukungahloniphi okwakushiwo, kepha mhlawumbe lokho empeleni kuyalisekela iphuzu lokuqala… ukuthi lolu hlobo lwesakhiwo ludalula ubuthakathaka kumphathi ompofu. Ngeshwa kulesi simo bekunguwe othole "ukuphela okufishane", kepha uma kunezinxushunxushu ezanele phakathi kwamasosha maqondana nokusebenzisana kwemenenja nabasebenzi, lokho kuzovula amehlo abaphathi abaphezulu ngezinkinga zalowo mphathi… ” umphetho ”yisisho engikholwa ukuthi sisetshenzisiwe.
Ngiyethemba lapho ushiye, ukwazile ukuya kokunye okungcono?